MIYUU SUURA GAL AH IN LA CUNO TOONTA DHARKA, OO AY KU JIRAAN LUGAHA: MARKA LA OGGOL YAHAY IN LA CUNO IYO MARKA AANAY U QALMIN, IYO SIDOO KALE QAABABKA ISTICMAALKA IYO CUNTADA SIDA DAAWEYNTA - BEER CAGAARAN
Daryeelka caafimaadkaaga - miyuu suurtagal yahay in lagu cuno toonta dharka? Daawooyinka Daawada
Garlic waa badeecad aad u faa'iido badan oo muhiim ah, taas oo lagu taliyey in la cuno cuduro kala duwan.
Waxaa ku jira xaddi badan oo fiitamiino ah iyo walaxyo xoojiya nidaamka difaaca, la dagaallanka bakteeriyada iyo ka saarida jirka bini-aadanka.
Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa in ay suurtagal tahay in la cuno khudraddan cudurkan, oo ay ku jiraan haddii ay lugaha ku jiraan.
Ma suurtagal in la isticmaalo khudradda cudurka?
Gout waa cudur halis ah, sidaa daraadeed dadka ku xanuunsanaya waxay u baahan yihiin inay aad uga taxadaraan cuntadooda. In kasta oo xaqiiqda ah in khudaarta, oo ay ku jiraan toonta, ay ka caawiso in ay caadi u yeelato heerka uric acid ee jirka, waa in aan lagu xadgudbin.
Goormaa la oggol yahay in la cuno?
Garlic loogu talagalay turjumaadda waa la isticmaali karaa. Laakiin tani waa in lagu sameeyaa tiro macquul ah. Sida cudur kasta oo kale, waxa ugu muhiimsan - in la ilaaliyo dareenka saamiga. Isticmaalka badeecadaani waxay caawisaa xoojinta xirmooyinka, cadaadiska caadiga ah, waxay qabataa hawl ilaalin. Faa'iidada kale ee isticmaalka toonta ayaa ah awoodda ay ku yareyso heerka kolestaroolka dhiigga.
Waa muhiim. Isticmaalka toonta sida daroogada ugu weyn ee loogu talagalay turjumaanka waa in aan la oggolaan. U hubso inaad raadsato kaalmo caafimaad oo tayo leh.
Goorma cuni kari waayaan?
Xaddid ama baabi'inta isticmaalka khudradda waa inay noqdaan dad kale oo kuxirsan gout, cuduro la xiriira, sida:
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan goorta la isticmaalo toonta, iyo goorta - maya, waxaad ka heli doontaa alaabtayada.
Foomkee ayaa lagu talinayaa in la cuno oo loo isticmaalo daaweynta?
In lagu daaweeyo gout, khabiiro ku talinaynaa in la cuno toonta ee qaabkeeda saafi ah: hal - laba xabo oo maalintii ah calool madhan. Sidoo kale samaynta boomaato dhirta iyo tinctures.
Bariiska saliidda ku salaysan
Isticmaalka dibadda ee tufaax loogu talagalay turjumaanka waxaa xaq u leh xaqiiqda ah in dhirta ay leedahay guryaha soo socda:
waxay yareysaa bararka;
wuxuu leeyahay tallaabo ka hortag ah.
Si aad u diyaarisid cadarka, waxa aad u baahan doontaa soodhada iyo saliidda ama saliidda qudaarta si siman.
Garlic waxaa lagu rusheeyaa gaas yar oo si fiican isku qasan subagga.
Biyaha caddaynta ayaa lagu dabaqayaa meelaha ay saameeyeen, ka dib markii ay ku duubaan faashad, sida aad u heli karto gubasho maqaarka.
Koorsada daaweyntu waxay socotaa 8 ilaa 10 maalmood. Saliida waxaa lagu keydin karaa meel qabow mug leh.
Haddii aysan suurtagal ahayn in la diyaariyo noocaas oo kale, waxaa lagula talinayaa in ay si fudud u xoqaan dhibicda oo xanuun leh dhar qoyan.
Cuntada ugu caansan iyo waxtar leh waa tincture oo ku salaysan toonta iyo vodka.
Wixii karinta u baahan tahay:
3 madaxyo waaweyn oo khudradeed;
2 koob oo ah vodka wanaagsan.
Garlic waa la diiriyo, la jajabiyey oo vodka ku shubay. Insistu waa inay ahaataa laba asbuuc gudahood meel qabow mug leh.
Waqti ka waqti, tincture waa in la ruxruxo.
Koorsada daaweynta waa 20 maalmood. Nidaamka dawada waa sidan soo socota:
Maalinta 1aad: Ku dar dhibic tincture ah hal galaas oo caano ah kana cab cuntada ka hor.
Maalin kasta oo ka mid ah maalmaha soo socda tirada dhibcaha ayaa kordha.
Maalinta tobnaad waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro toban dhibcood oo tincture ah caanaha, iyo kow iyo tobnaad iyo maalmaha soo socda tirada dhibcaha waa in la yareeyo hal mid.
Nidaamkani wuxuu ka caawiyaa ma aha oo kaliya xanuunka iyo xanuunka ee kudubyada, laakiin sidoo kale dhibaatooyinka mindhicirka. Saameyn wanaagsan ayaa sidoo kale lagu arkay atherosclerosis.
Khabiiradayadu waxay kuu diyaariyeen qoraallo taxane ah oo ku saabsan sifooyinka isticmaalka toonta ee cudurada sida pankreatitis iyo cholecystitis, gastritis, nooca 1 iyo nooca 2 diabetes, iyo sidoo kale dhibaatooyinka beerka iyo cadaadiska dhiigga. Intaa waxaa dheer, akhri waxyaabaha ku saabsan faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka isticmaalka alaabtaan haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya iyo sida loo bilaabo u bixinta carruurta.
Cawaaqib xumo macquul ah
Inkastoo xaqiiqda ah in dhirta ay tahay wax soo saarka dabiiciga ah, waa in lala socdaa taxadar iyo ka dib markaad la tashato dhakhtarkaaga.
Dhibaatooyinka leh mindhicirrada, kelyaha, qaba cudurada dareemayaasha iyo culeyska, waxay ka fiican tahay in laga saaro toonta cuntada. Xaqiiqdu waxay tahay khudradda waxaa ku jira waxyaalo aad u firfircoon, taasoo kordhin karta calaamadaha cudurrada laysku duro. Intaa waxaa dheer, cuntooyinka basbeelka ah waxay hurdaan cuntada oo xad-dhaaf ah, taas oo aan saameyn ku yeelato jirka si habboon.
Isticmaalka dibadda ee toonta ayaa waliba aan ammaan ahayn. Mid ka mid ah cawaaqibka codsiga aan habooneyn ayaa noqon kara gubasho. Dadka qaba maqaarka xasaasiga ah mararka qaarkood waxay leeyihiin fal-celin xasaasiyad ah oo lagu sameeyo faleebo. Inkastoo xaqiiqda ah in toontu ay tahay warshad aad u faa'iido leh oo caawisa calaamadaha gout, arthritis, hoos u dhigo cadaadiska dhiigga iyo ilaalinta cudurrada viral, waa in la xusuustaa in aysan ahayn daawo ka bogsiin karta cudurrada oo dhan.
Iyada oo sida cudur daran sida gout, daawooyinka toon-ku-salaysan ayaa caawin doona jirka, laakiin howlaha ugu muhiimsan ee daaweynta ayaa qaadan doona daawooyinka. Sidaa darteed, ha is-daweeynin. Iyo taageerayaasha daawada guriga ee caadiga ah waa in looga baahan yahay in ay maraan baaritaan caafimaad oo ay helaan talo iyo magacaabid khabiir.